Bev Sibanda’s story: Hubby cheating on her in the UK with a married woman from Kadoma
Home/Entertainment/Zim Celebs/Bev Sibanda’s story: Hubby cheating on her in the UK with a married woman from Kadoma
Bwalya ChandaJune 14, 2021
Yesterday raunchy dancer Beverly Bev Sibanda was trending left, right, and center as she revealed that her husband who is based in the UK was cheating on her with a Kadoma woman. Below are the full details of the story…
THOSE WHO ARE CURIOUS MUKADZI ARIPAMA PICS ANONZI MAI PONDO VATAURWA KU LIVE YAMAI TT, NUDHU RAVO TINARO RE HURE IRI
Akaenda UK after that guy anesutu in the photo married her from Kadoma, but rumor has it kuti akabva nenhumbu yen’nga yakamubatsira for tye guy to marry her and bring her to the UK. When she got here akatanga kuhurira murume and they broke up but got back together zvadaro vanga vakuvhara vanhu mari. Vachiti vanoziva a person who can help them get pregnant, keep their marriages and kugarisa varume pasi.
Some women where barren and desperate vakavanyepera and took mari yevanhu. Akatombobuda pamvenge mvenge. Zvokutoti if you do post her you will be shocked vanhi vachauya forward. Ndiye akapa (as she claims) Cookie Mudiwa Lyon mushonga weku gadzira murume. Pela ane mutwin sister but hamuposter nekuti ane original colour uyu pela akableacher saka hadi kuti vanhu vazvione.
Murume wa Mai Pondo Pela akatodzingwa ku Nursing uku nechimbavha chavaiita. Alatombobva pa social media abatwa nemurume wemunhu recently anonzi Blessing Bonka. Akabisa nhumbu yaBlessinh iyeye but paitwa live nhasi NaBev ndatozona kuti no mani this girl anga akatopa varume 3 nhumbu iyi ndosaka akaibisa as u can see akabva Kure ne chihure achiri black kusvika now ave Blleachaldo.
Beverly Bev Sibanda
President Kenneth Kaunda falls sick, admitted at Maina Soko Military Hospital